समय तोकेरै ना’साले भविष्यवाणी गर्यो, चन्द्रमामा आउने हलचल र पृथ्वी न-ष्ट हुने दिन – List Khabar
Home / रोचक / समय तोकेरै ना’साले भविष्यवाणी गर्यो, चन्द्रमामा आउने हलचल र पृथ्वी न-ष्ट हुने दिन
समय तोकेरै ना’साले भविष्यवाणी गर्यो, चन्द्रमामा आउने हलचल र पृथ्वी न-ष्ट हुने दिन
admin3weeks ago रोचक Leaveacomment 330 Views
छोराको अनुहार आफ्नो जस्तो नभएपछि श्रीमानले थाले अनुसन्धान, खुल्यो यस्तो अनौठो रहस्य
महिलाहरुले ब्राभित्र पैसा घु’साएर किन राख्छन् ? यस्तो छ कारण
नाभिका बारेमा यी १० रोचक कुरा जसले तपाईलाई आश्चर्यमा पार्नेछ !
काठमाडौं । मौस’म परिवर्तनका कारण, पृथ्वीमा मौसम तिव्र रूपमा प-रिवर्तन हुँदैछ ।जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको ता’पक्रमले हिमनदी पग्लिरहेका छन् । हिमनदी फुटेपछि धेरै देशहरूमा बाढीको समस्या पनि नभएको होईन ।मानिसहरुले समयमा विचार गर्न नसके यो अवस्था झन ड’रलाग्दो हुने देखिन्छ ।
हालै अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले एक अध्ययनमा गरेको दावीले सबैको हो’स उडाएको छ ।चन्द्रमा पनि मौसम परिवर्तनको कारण हुन सक्ने भन्दै गरिएको एक अध्ययनले सबैको हो’स उडाएको हो ।नासाले आफ्नो प्रतिवेदनमा सन् २०३० मा जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्रको सतह बढ्ने बताएको छ ।
त्यस क्रममा चन्द्रमाले आफ्नो कक्षा परिवर्तन गर्नेछ । त्यसरी चन्द्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दा पृथ्वीमा विनाशकारी बाढी ल्याउने विश्वास गरिएको छ । त्यो बाढीले पृथ्वीमा धेरै प्राणी र बनस्पती न-ष्ट हुने नासाको दावी छ ।
नासाको यो अध्ययन जून २१ मा जर्नल नेचरमा प्रका’शित भएको थियो । अध्ययनमा, चन्द्रमामा आएको परिवर्तनका कारण पृथ्वीमा आएको बा’ढीलाई ‘उपद्रव बाढी’ भनिएको छ ।यस प्रकारको बाढी समुद्री तटहरुमा आउने जनाइएको छ । स’मुद्री छालहरू औसत दैनिक उचाइ भन्दा २ फिट माथि उठ्दा समुद्री यस्तो बाढी देख्न पाइनेछ ।
घर र सडकहरू सबै डुब्नेछन् र दैनिक तालिकामा नसोचेको अ’सर पर्नेछ । नासाको एक अध्ययनका अनुसार २०३० को दशकको मध्यसम्म भयावह बा’ढीको अवस्था सिर्जना भई अचानक अनियमित हुनेछ ।
यो प्रवृत्ति एक दशकसम्म जारी रहने पनि उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले यो पनि भन्यो कि बा’ढीको यस्तो अवस्था वर्षभरि नियमित हुँदैन । केही महिना मात्रै यस्तो भ’या’वह अवस्था सि’र्जना हुनेछ, जसले यसको जो’खिम बढाउँछ ।
तटीय क्षेत्रमा ठूलो वि’ना’श
नासाका प्रशासक बिल नेल्सनका अनुसार समुद्री सतह बढेपछि तटीय क्षेत्रमा बाढीको जो’खिम बढ्दै जाने ख’त्तरा हुन्छ । लगातार आउने बा’ढीका कारण सर्वसाधारणको मु’स्कि’ल पनि बढ्दै जानेछ ।
ति क’ठि’नाइहरू दैनिक अझ थप बढ्ने देखिन्छ । उनले भने, ‘चन्द्रमाको कक्ष परिवर्तन भएको कारण, गुरुत्वाकर्षण बल बढ्दो समुद्री सतह र जलवायु परिवर्तनले समुद्री तटमा वैश्विक स्तरमा बाढीको अवस्था सिर्जना गर्नेछ, जसका कारण ठूलो वि’नाश हुन सक्छ ।’
चन्द्रमाले आफ्नो स्थान बदल्नेछ
हवाई विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक र अध्ययनका प्रमुख लेखक फिल थम्पसनका अनुसार यो भयावह हुनसक्छ ।
पृथ्वीमा चन्द्रमाको प्रभावले आएको बा’ढीको बारेमा कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘जब चन्द्रमा आफ्नो कक्ष परिवर्तन गर्छ तब त्यसलाई पुरा हुन १८.६ बर्ष लाग्छ । तर त्यसको का’रणले पृथ्वीमा बढ्’दो ताप, बढ्दो समुद्री सतहसँगसँगै ख’तरनाक हुन्छ।’
चन्द्रमाले जमीनमा अ’सर पार्नेछ
थम्पसनका अनुसार १८.६ वर्षमा आधा समयको लागि, अर्थात् पृथ्वीमा करीव ९ वर्ष, समुद्री ज्वारको वृद्धि घ’ट्छ । उच्च ज्वारको उचाई सामान्यतया कम हुन्छ, कम ज्वारको उचाई प्राय बढी हुन्छ ।अर्को तर्फ, अर्को ९ बर्षको लागि यो उल्टो हुन्छ । अर्को पटक यो चक्र २०३० को आसपास सिर्जना हुनेछ, जसका कारण जनजीवन प्रभा6वित हुनेछ ।
Previous दक्षिण अफ्रिकाकी एक महिलाले ७ महिनामै एकैपटकमा जन्माइन् १० सन्तान, राखिन बिश्व रेकर्ड
Next कसरि बाहिर अभिनेत्री पल्पसाको मृत्युको खबर ?
मानिसको आ-आफ्नै आनीबानी बारे कुरा गर्ने हो भने सबै मानिसको कुन व्यवहार स्विकार्य र कुन …